Esi tinye Ngwa maka Kaadị Canada nke Na-adịgide Adịgide
Ònye Kwesịrị Iji Nweta Kaadị Canada Na-adịgide Adịgide
Ndị Canada kwabatara na-ebi na-adịgide adịgide bụ ndị rutere Canada tupu June 28, 2002 kwesịrị itinye akwụkwọ maka Kaadị Na-adịgide Adịgide. Kaadị na-anọchi akwụkwọ IMM 1000. Mgbe December 31, 2003, ndị Canada nile na-adịgide adịgide, gụnyere ụmụaka, na ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala na-alọghachi na Kanada ga-eji kaadi ọhụrụ ahụ gosipụta ọnọdụ ha.
A na-enyefe kaadị ebighi ebi maka afọ ise, ma ọ bụ n'ọnọdụ dị iche iche maka otu afọ.
Ndị bi na-adịgide adịgide bụ ndị na-eme atụmatụ ịkwaga ná mba ọzọ kwesịrị ịnweta Kaadị Na-adịgide Adịgide tupu ha apụ. I kwesiri itinye akwụkwọ maka onye na-ebi ebi ebighi ebi ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ tupu ị gawa. Oge nhazi nwere ike ịdị iche iche, ya mere nyochaa oge nhazi oge nke Canada Citizenship na Immigrashọn na-agbanwe.
Ndị kwabatara na-aghọ ndị Canada na-adịgide adịgide bi na ma ọ bụ mgbe June 28, 2002 na-adịghị mkpa itinye akwụkwọ maka Kaadị Na-adịgide Adịgide. A ga-ezipụ gị Kaadị Na-adịgide Adịgide na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ị nyeghị adreesị nzipu ozi na Canada Agency Agency Service mgbe ị banyere Canada, ị ga-eme ya ngwa ngwa o kwere mee. Ị ga-enye adreesị ozi-e gị n'ime ụbọchị 180 ịbanye Canada, ma ọ bụ ị ga-etinye akwụkwọ maka Kaadị Na-adịgide Adịgide ma kwụọ ụgwọ ego kwesịrị ekwesị.
Ị nwere ike ịnye adreesị ozi-e gị n'ịntanetị ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ Onye Na-edebe Kaadị Nhọrọ Kaadị.
Ọdịdị nke Kaadị Ndị Na-adịgide Adịgide
Ebe ọ bụ na a na-enye Kaadị Na-adịgide Adịgide ruo afọ ise, ma ọ bụ n'oge ụfọdụ otu afọ, ndị bi na-adịgide adịgide kwesịrị ịlele ụbọchị mbibi na CARD ha ma ọ bụrụ na ha ezube njem na Canada.
Kedu kaadị ndị na-adịgide adịgide afọ ise malitere ịkwụsị na July 2007 . Jide n'aka na ị ga-etinye maka Kaadị ọhụrụ na-adịgide adịgide ma ọ dịkarịa ala ọnwa abụọ tutu ị eme atụmatụ ịhapụ obodo ahụ.
Ndị Kuki Ngwa na Ụdị Na-adịgide adịgide
Ịnwere ike ibudata ihe ngwa ngwa ngwa na-adịgide adịgide na ụdị si saịtị Citizenship and Immigration Canada. Ụdị a ga-agwụcha, bịanyere aka ma zipụ ya na adreesị e nyere na ụdị. Ntuziaka zuru ezu maka imelite ụdị ahụ na akwụkwọ ndị achọrọ ka esonye na ụdị ahụ bụ na ntụziaka ahụ na-abịa na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akwụkwọ ngwa ngwa ebipụtara gị, ị nwere ike ịkpọ Ụlọ Ọrụ Na-adịgide Adịgide na 1-888-242-2100. Enwere ike izipu kuki na adreesị dị na Kanada. Kwe ka ọ dịkarịa ala izu abụọ maka nnyefe.
Ụgwọ Ụgwọ Maka Ụlọ Ndị Na-adịgide Adịgide
Ọnụ ego maka nhazi ngwa ngwa na-adịgide adịgide bụ $ 50.00. Ụgwọ bụ isiokwu ịgbanwe.
E nwere ụzọ abụọ ị ga-esi akwụ ụgwọ ngwa ngwa ahụ.
Na-akwụ ụgwọ n'Ịntanet
Dee ego gị na ụlọ ọrụ ego na Canada. Iji kwụọ ụgwọ ahụ, ị ​​ga-akwụrịrị ụgwọ mbụ nke Ụgwọ Mpempe akwụkwọ IMM 5401, ma were ya na ego ego gị na ịkwụ ụgwọ gị. Ụlọ akụ ahụ ga-edepụta akwụkwọ azụmahịa. Ị wee tinye akụkụ nke etiti (Detuo 2) gaa ngwa ngwa nke gị na-adịgide adịgide.
Ụgwọ ahụ anaghị akwụ ụgwọ.
Ihe ndị na-eme ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịkwaga na Canada ma echeghị na ị ga-enwe oge iji nweta Kaadị ebighi ebi tupu ị ahapụ Canada, Citizenship and Immigration Canada nwere ike ịmepụta ngwa gị ngwa ngwa. Ozi nyocha gbasara ihe gbasara ngwa ngwa iji chọpụta otú ị ga-esi rịọ ka e debe ngwa gị ngwa ngwa.
Ndị bi na-adị ndụ na-achọ ịlaghachi na Kanada, ndị na-enweghị Kaadị Na-adịgide Adịgide nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ visa kachasị dị na Kanada iji nweta akwụkwọ eji eme njem na-abaghị uru iji banye Canada ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị $ 50 ọ bụla. Ịnwere ike ibudata ngwa maka akwụkwọ njem (onye na-adịgide adịgide na mba ọzọ) online.
Lelee Ọnọdụ nke Ihe Nwee Kaadị Gị Na-adịgide Adịgide
Iji lelee onodu nke ngwa ngwa ogugu nke onye obula, i nwere ike iji ngwa ngwa ngwa ngwa nke ndi Canada.
Biko rịba ama na ọkwa nke ngwa gị agaghị egosi na Ngwaọrụ Ngwa Ngwa ruo mgbe Citizenship and Immigration Canada amalitela ịhazi ngwa gị. Iji chọpụta oge ọ ga-ewe iji dezie ngwa gị, lelee oge nhazi oge a. Enweghị isi n'ịlele ọnọdụ nke ngwa gị ọ gwụla ma oge nhazi oge a agafeela.
Ajụjụ gbasara gị na-adịgide adịgide Kaadị Ngwa
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara Ngwa Ngwaahịa gị na-adịgide adịgide, kpọtụrụ Citizenship and Immigration Canada Call Center ma ọ bụrụ na ị nọ na Kanada, ma ọ bụ ụlọ ọrụ visa gị ma ọ bụrụ na ịnọ n'èzí Canada.
Iwu maka ndị ọbịa na-eweta mmanya na-aba n'anya Canada
Egwurugwu Ala Ala nke Canada
Oké Osimiri Canada na 1998
Ịwụnye Pedel Pedals
Ezi Betting Systems
Ụmụ nwanyị nke Harmen Renaissance
N'ihe banyere Iwu Iwu Ahụhụ Ụmụ anụmanụ
Nchọpụta Nchọpụta maka Freewriting
Ngwurugwu Chytrid na Frog Extinctions
Geography nke Australia
Nnukwu mmanụ aṅụ
Mụta otu esi eme Ngwá Ọrụ Gymnastics
Ụlọ America Na-agba ume site na French Designs
Mkparịta ụka Kasịnụ nke onyeisi oche nke Barack Obama
Ihe Odide Art
Ihe mere ndị oji ojii ji enwe mmekọrịta dị mgbagwoju anya na Fidel Castro
Ihe Mere Mmetụta Ji Eju Ọhụụ Maka Ụmụ Akwụkwọ Ụfọdụ
Geography nke Pacific Ocean
Mmalite nke Egwuregwu Ngwụrụ Egbochi n'Amerịka
Ọnwa Ochie Black - Ndị American Patent Holders - A
Nkọwa na ihe atụ nke Purism asụsụ
Kedu ihe bụ "Nkọwa" na ụdị ahụ?
Achọpụta ihe gbasara ndị nwanyị
Ọhụrụ Ngwá Ọrụ Scavenger Hunt Icebaker Ọrụ
BAKER - Aha nnabata na mmalite
The Chevy Nova Nke Na-aga
Ndi Akpanikpo ke Bible?
Ndị Amụma nke Akwụkwọ Mbụ nke Mormon
Egwuregwu ndị dị na Urban: Usoro Ndozigharị Na-achịkwa nke Agha nke Warren Buffett nke 2013